China Venturi Mask-2 Umbala ifektri kanye nabaphakeli | I-Bornsun
1.Mask nge wayibhinca nokunwebeka
Isiqeshana sekhaleni esishintshekayo
3.With 2m tubing
4.Oxygen lokuhlushwa kuyinto 24% -50%
5.usayizi: XS, S, M, L, L3, XL
6.100% latex free, DEHP free iyatholakala ngokuzikhethela.
7.Inzalo ngegesi ye-EO uma kudingeka.
1.Material: Medical grade PVC
2.Sterilization: EO igesi
Ukupakisha: 1 pc / i-PE Bag ngayinye, i-100pcs / ctn
Isitifiketi se-4.Quality: CE, ISO 13485
5.Lead isikhathi: ＜Izinsuku ezingama-25
6.Port: Shanghai noma Ningbo
7.Umbala: Transperant noma Green
Ukufundiswa Kosayizi Wobuso:
I-1.Size XS, Infant (0-18 izinyanga) Isigaxa sobuso esimise okwakheka komzimba sakha uphawu oluvikelekile olusiza abazali nabanakekeli abahlinzeka ngemithi ye-aerosol ezinganeni.
I-2.Size S, i-Pediatric Elongated (iminyaka engu-1-5) Isigaxa sobuso esimise okwenziwe ngokomzimba sakha uphawu oluvikelekile olusiza abazali nabanakekeli abasebenzisa imishanguzo ye-aerosol enganeni encane.
3. Usayizi M, I-Pediatric Standard (iminyaka engu-6-12) Isifihla-busu esithe ukuba sincane kakhulu sizohlinzeka ngophawu oluvikelekile lapho ingane ikhula. Siza ukufaka imithi ye-aerosol ezinganeni ezigangile futhi ezenqabayo ukuhogela ama-MDIs.
4. Usayizi L, Izinga Labadala (iminyaka eyi-12 +) Imihlahlandlela incoma ukuthi iziguli zishintshelwe kumkhiqizo womlomo ngokushesha nje lapho zikwazi khona - imvamisa zineminyaka eyishumi nambili ubudala.
5. I-Size XL, i-Adult Elongated (iminyaka eyi-12 +) Imihlahlandlela incoma ukuthi iziguli zishintshelwe kumkhiqizo womlomo ngokushesha nje lapho zikwazi khona - imvamisa zineminyaka engaba ngu-12 ubudala.
Ububanzi beminyaka engenhla benzelwe ireferensi ejwayelekile kuphela
Langaphambilini IVenturi Mask
Olandelayo: Ingcindezi ukumnika Bag